Accueil > Gazetin'ny nosy > Josekely sy Jesy Rabelaolao: Tanora 100 ao Miarinarivo-Itasy indray no ampiofaniny
Josekely sy Jesy Rabelaolao: Tanora 100 ao Miarinarivo-Itasy indray no ampiofaniny
Tohin’ny fampianarana “ cours des vacances” izay nataon’ ingahy José Andrianoelison antsoina hoe Josékely sy ny mpanao gazety Jesy Rabelaolao teto Antananarivo nandritrin’ny fialan-tsasatra lehibe teo, mahakasika ny fanomezana maimaimpoana ny fahalalana mahakasika ny asa fanaovan-gazety, dia namaly ny fangatahan’ny tanora ao Miarinarivo Itasy indray izy roalahy ireto. Raha toa ka niompana tamin’ny fahalalana momba ny asa fanaovan-gazety fotsiny ihany: “Initiation pratique du journalisme”, dia nokendrena hifanaraka amin’ny filana notakian’ireto tanora ireto ny fanofanana ka sady nasiana fahalalana mahakasika ny asa fanaovan-gazety ary fahalalana amin’ny ankapobeny momba ny serasera ary fanabeazana olom-pirenena (Communication, Journalisme et éducation de citoyen) no natao amin’izany.
Tanora 100 eo ho eo no tonga nanatrika ny fiofanana izay avy amin’ny sehatra maro ao Miarinarivo Itasy ka nahitana mpianatra sy mpampianatra ary olona mpamboly koa tonga tamin’izany ny sabotsy faha 11 novambra 2017 lasa teo tao amin’ny Lycée Catholique ao Miarinarivo Itasy. Nahitana ny mpanao gazety sasan-tsasany tao amin’ny faritra koa ilay fiofanana. Mbola fanofanana maimaimpoana hatrany no antaon’izy roalahy ireto, araka ny tarigetrany hoe “aoka mba hizara izay kely ananany ho fanatsarana ny mpiara-belona aminy, izay afaka manao izany”.
Olon’ny serasera sy ny fikarohana ary ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fiarahamonina izy roalahy ireo raha nanaraka tsara ny tantara nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay isika. Nampian’ny fikambanana iray antsoina hoe “Madagasikara Nosy Sambatra” izay tarihin’i ramatoa Ony Rabemanantsoa, ary tohanan’ny orinasa fanaovan-gazety “La Gazette de la Grande Ile” izy ireo.
Haharitra iray volana ny fanofanana hataon’Andriamatoa José Michel Andrianoelison
“Josekely” sy Jesy Rabelaolao any Miarinarivo Itasy izao.
Hita taratra tamin’ny fanombohan’izany fampianarana izany tany Miarinarivo –Itasy ny sabotsy teo fa liany tamin’ny fiofanana ireo tanora ireo any amin’ny faritra ity saingy olana ny tsy fisian’ny sehatra hahazoany izany. Niniana nampidirina koa ny fanabeazana olom-pirenena amin’ity fanofanana ity mba hisian’ny hamerenana ny soatoavina Malagasy sy ny fahalalana amin’ny ankapobeny amin’ny fiainampirenena.
Raha nanontaniana mahakasika manokana ny antony namaliany ny antson’ireto tanora ireto moa ingahy Josekely dia tsotra no navaliny fa : “hizara izay kely haiko aho”, ary ny ramatoa Ony Rabemanantsoa indray izay filohan’ny fikambanana Madagasikara Nosy sambatra dia tsiky no navaliny ny fanontanianay ka hoy indray izy hoe “ aoka isika hifanome tanàna” dia ho sambatra tokoa i Madagasikara.